Sei Sarudzai Us - Hangzhou AODI Electronic Control Co., Ltd
Nokusarudza AODI, uri kusarudza kushandisa akazvitsaurira chikwata kuchaja nyanzvi mhinduro '.
AODI opedza kutsvakurudza, magadzirirwo, kugadzira, rokutengesa uye pashure-rokutengesa kuti bhatiri mundiro. Tiri kuramba kuferefeta michina mitsva uye vanokurudzira pavanenge musoro. Sezvo chinoshamisa OEM mundiro kuti mugadziri muna China, munhu wose ari AODI ari mukuru kutsva uye mutengi kutanga kufunga vanhu ose.
AODI anotanga basa rake kubva Jan 2010 uye anotambira mari yakakwirira mukurumbira kubva vatengi vedu kusanganisira China uye mhiri kwemakungwa tiine unhu zvinhu uye pamusoro-notch basa. Pane 4 kugadzirwa mitsetse izvozvi uye 3 R & D Centers pamwe nenyanzvi engineering rwokugadzira.
Customized ndiro vari akagamuchira muna AODI. Ungave uchida mutsva kana yokutsiva mundiro, Nokuraramisa, kana zvekushandisa zano, Aodi anogara parutivi uye kuteerera zvaunotaura uye kupa basa panguva nezvaunoda. Plus, kutungamirira-nguva yokuti chero muenzaniso neako unotsaurirwa mukati memazuva 7.